Igumbi kwi-Common House
Yiza, undwendwele iLake Charles! Ukutsiba ngokukhawuleza kwi-I10, imizuzwana ukusuka phakathi kwedolophu. Ngokukodwa kutshintsho, indlu eneminyaka eli-100 ubudala kwiMonastery yoLuntu kwiingqondo zoyilo kunye nemimoya.
Iibhayisekile ezi-3 kwipropathi, imizuzu emi-3 ukukhwela ukuya echibini.
Ndwendwela: Iimbotyi zeStellar ezidumileyo ngesidlo sakusasa esilite, ukuzolula & ukuhamba eYoga Ctr, ibha yeLuna kunye negrill, yokudlela.
* Jonga: ~ Incwadi yesiKhokelo iya kukunika izinto ezininzi omawuzenze, ubone & ungcamle ~ usayila uhambo lwakho, cwangcisa ukuhlala ujikeleze iintsuku ezimbalwa kunye namava e-LC!
Qaphela, sikhanyisa isiqhumiso kunye neentonga ze-smug ngamaxesha athile ukuba unochuku kuloo nto.
Iibhedi eziphantsi zingaphakathi! Igumbi elingaphambili linokwamkela iindwendwe ezi-4, nokuba nemvakalelo eninzi 'ye-Back-packer'; ukuba wena kunye nabahlobo nihamba njengeqela, ababini banokwabelana ngebhedi yokumkanikazi kwaye ababini banokulwa ngokuba ngubani ofumana ibhedi ephezulu.
Ukuba usisibini esihambayo, iibhayisekile ezi-3 ziyafumaneka kwishedi yommelwane kunye nokukhwela ibhayisekile ephambi kwechibi.
Amaphepha acocekile, nangona ngokudlalayo ephosakele, kwaye aneziphene ezimbalwa.
Sikwisitrato esiqhele ukuzola, (kukho uhlobo lweyure engxamisekileyo nangona) kanye ezantsi kwedolophu kunye nokukhwela nje ibhayisekile eyi-3min okanye imizuzu eli-10 ukuya kwindawo ephambi kwechibi kunye nokutya okulungileyo!
4.93 ·Izimvo eziyi-537
4.93 · Izimvo eziyi-537
Sizibhloko ezi-3 ukusuka edolophini. Iibhloko ezi-4 ukusuka kumda wechibi. Thatha iibhayisekile, ukhwele ujikeleze iGadi yethu enomtsalane kunye neSithili sezeMbali saseCharpentier, (ukuhamba ngebhayisekile kunye nezitrato zomda wokuhamba: north-Mill st./east-Enterprise/south-10th st. kunye ne-west-lakefront.) Thatha ekuphumeni kwelanga/ukutshona kwelanga kwi-sunrise ichibi, ukuzingela ubuncwane kwiCedar Chest Antiques, thatha uhambo lokuhamba nge-3 kwimigangatho ye-1911 ye-Historic City Hall & Cultural Centre, okanye, ujabulele ubomi basebusuku kwi-Luna okanye i-Crystal okanye i-Stellar Beans, 'i-ono grinds' kwi-Fish Camp yaseTia Juanita, I-Blue Dog Cafe, izinja ezithandekayo zaseBotsky! ...
Ndiyakuthanda ukuhlala edolophini!
Kusenokubakho izinto eziqhubekayo, kodwa njengoko besitshilo, umbono weNdlu eqhelekileyo intsha. Emveni kokusweleka kukatata ndikhe ndihambe ngamanye amaxesha ndigoduke ngamanye amaxesha. Lithamsanqa nje-lomzobo endinokuthi/ndingakwazi ukunxibelelana.
Kwakhona, kukho iKati ye-CommonHouse: 'Bodhi' ligama lakhe ke, yiza neBenadryl yakho ukuba une-allergies.
Kusenokubakho izinto eziqhubekayo, kodwa njengoko besitshilo, umbono weNdlu eqhelekileyo intsha. Emveni kokusweleka kukatata ndikhe ndihambe ngamanye amaxesha ndigoduke ngamanye am…